သမိုင်း | မြျှောလငျ့ခ Medical Center မှ
2019. 4. 25. အိပ်မက်ထဲကမျှော်လင့်စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွင်ပဉ္စမအစည်းအဝေးအရာရှိတွေသက်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီများကျင်းပ
2019. 5. 28. အိပ်မက်ထဲကမျှော်လင့် Medical Center မှာတွင်အခမဲ့ကျန်းမာရေးပြ supporting အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများကိုကောက်ယူ
2019. 6. 3. မျှော်လင့်ခြင်းဘက်တော်သားနိုင်ငံခြားရေးကာကွယ်ဆေးထိုးပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်အပေါ်အိပ်မက်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာ
2018. 4. 12. ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများအတွက်သင်တန်းများလာရောက်လည်ပတ်ကနျြးမာရေး (အမျိုးသားဒုက္ခသည်ထောက်ခံမှုအုပ်စုများခိုလှုံရာ)
2018. 5. 29. 2018တစ်နှစ်တာ-အပေါ်အိပ်မက်ထဲကမျှော်လင့်စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာအဆိုပါ 4th အစည်းအဝေးအရာရှိတွေသက်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီများကျင်းပ
2018. 6. 8. 2018တစ်နှစ်တာ-အပေါ်အိပ်မက်ထဲကမျှော်လင့်စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာကော်မတီကျင်းပ
2018. 6. 27. အိပ်မက်ထဲကမျှော်လင့် Medical Center မှ6နှစ်မြောက်စာတမ်းဖတ်ပွဲတွင်
2018. 8. 1. အိပ်မက်ထဲကမျှော်လင့် Medical Center မှာတွင်ကောက်ယူဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးများကိုကယ်ဆယ်ရေးပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်
2018. 8. 1. မျက်စိကန်းသောအပြောင်းအလဲအတွက်အိပ်မက်ထဲကမျှော်လင့် Medical Center မှာတွင် (ဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံလက်တွေ့ပါမောက္ခပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီ sonjihun ▶ဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီလက်တွေ့ပါမောက္ခ Lee Jong-seok,)
2018. 11. 21. အိပ်မက်တွင်မျှော်လင့် Medical Center မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကနျြးမာရေးလက်စွဲစာအုပ်ကိုထုတ်လုပ်
2017. 1. 18. ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုကုသမှုဖျော်ဖြေပွဲ
2017. 2. 1. "တစ်ဦးမြို့ပြဖောင်ဒေးရှင်းမှ" Center ကအာဏာပိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှု
2017. 3. 31. 2017တစ်နှစ်တာ-အပေါ်အိပ်မက်ထဲကမျှော်လင့်စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာကော်မတီ
2017. 10. 7. မျှော်လင့်ချက် Medical Center မှာကျင်းပ 5th နှစ်မြောက်စာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် Dream
2017. 6. 15. "Busan ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီ (လေး)"Center ကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းများသွားရောက်ခဲ့
2017. 6. 30. ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများအတွက်သင်တန်းများလာရောက်လည်ပတ်ကနျြးမာရေး (Jongno-Gu ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုထောက်ပံ့မြစင်တာ)
2017. 7. 6. သတင်းထောက်များကြက်ခြေနီနှင့် ပတ်သက်. ကောလိပ်ကျောင်းသားများကတွေ့ဆုံမေးမြန်း (ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆေးဘက် Imjin)
2017. 8. 23. , 2017. 9. 14. စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ခိုင်ခံ့စေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများနှင့်ကျန်းမာရေးပညာရေးပို့ချချက်များအတွက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဖောင်ဒေးရှင်းမှ (နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအုပ်စုကိုထောက်ခံကြောင်းကိစ္စတွင်ဂရုမစိုက်)
2017. 11. 6. '' နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ် '' ဆက်နွယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများအတွက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဖောင်ဒေးရှင်းမှ (တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေး 50 ထောက်ခံမှု)
2016. 2. 23. အိပ်မက်ထဲကမျှော်လင့်စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာကော်မတီအစည်းအဝေးတွင်
2016. 4. 4. အပိုဆောင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအိမ်ကစေလွှတ်ခဲ့သည်။(လှပသောမဟုတ်)
2016. 4. 7. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအပိုဆောင်းန်ထမ်းများစေလွှတ်(Imgyeongok)
2016. 4. 22. ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများအတွက်သင်တန်းများလာရောက်လည်ပတ်ကနျြးမာရေး(16လူပုဂ္ဂိုလ်များ)
2016. 11. 9. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းပြောင်းခြင်း(Gimsujeong -> Imjin)
2016. 11. 25. အပိုဆောင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကကုသမှုကိုစတင်စေလွှတ်(Songyeonghui)
2016. 12. 21. အိပ်မက်ထဲကမျှော်လင့်စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာလူမှုရေးလုပ်သားတအင်တာဗျူးများ hosting အပေါ်မဂ္ဂဇင်းကျုံး
2016. 12. 22. ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများအတွက်သင်တန်းများလာရောက်လည်ပတ်ကနျြးမာရေး(12လူပုဂ္ဂိုလ်များ)
2015. 3. 27. Yongsan အကြံပေးခြင်းလူငယ်လူမှုဖူလုံရေးအလယ်ဗဟိုစီးပွားရေးသဘောတူညီချက်
2015. 5. 26. သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတိုးတက်လာဖို့အခမဲ့ဆေးခန်းဆေးဝါးစ​​ီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အ (30လူပုဂ္ဂိုလ်များ)
2015. 6. 1. ထိုစာတမ်းဖတ်ပွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်ချက်ကိုအားနည်းချက်အုပ်စုများအတွက်ဆေးဝါးအကူအညီရှာသောအခါ
2015. 10.7တတိယပါတီများနှင့်ဆက်စပ်သောအေဂျင်စီများတွေ့ဆုံ(32Institution များ, 55 လူတစ်ဦးစုစုပေါင်း)
2015. 10. 22 ~ 2015. 12. 03. နာတာရှည်ဆေးရုံနှင့် Palliative စောင့်ရှောက်ဘို့တတိယအခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း
2015. 11. 24. မျှဝေခြင်းလော်ဘီဖျော်ဖြေပွဲ "ပေါ်တွင် Hyundai မော်တော် Chung Mong-Koo ဖောင်ဒေးရှင်း '' အိပ်မက် ensemble
2015. 12. 21. နာတာရှည်ဆေးရုံစေတနာ့ဝန်ထမ်းသုံးနှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်
2015. 12. 22. ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုကုသမှုဖျော်ဖြေပွဲ
2014. 2. 19. သက်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီများအရာရှိတဦးကအစည်းအဝေးတွေကျင်းပ (30လူပုဂ္ဂိုလ်များ)
2014. 4. 12. ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများအတွက်ကျန်းမာရေးကိုကလပ် Hold (20လူပုဂ္ဂိုလ်များ)
2014. 4. 30. ဆိုးလ်မြို့ Single-မိဘတစ်မိသားစုပံ့ပိုးမှုစင်တာစီးပွားရေးသဘောတူညီချက်
2014. 4. 16. ~ 5. 28. 2nd နာတာရှည်ဆေးရုံနှင့် Palliative အခြေခံပညာဆေးဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းများကျင်းပ
2014. 9. 20. မြျှောလငျ့ခ Medical Center မှပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးတဲစစ်ဆင်ရေး (ဒုတိယလူငယ်ကိုတက် Push
2013. 3. 13. Goyang-si ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုပံ့ပိုးမှုစင်တာစီးပွားရေးသဘောတူညီချက်
2013. 4. 02. Jjokbangchon ဒေသခံများကနားလည်မှုစာချွန်လွှာ (Donuidong အမိုးအကာနှင့်ချစ်ခြင်းတဦးထက်ပိုသောအဖွဲ့အစည်း)
2013. 4. 02. တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းမိခင်နေထိုင်သူများအဆောက်အဦနားလည်မှုစာချွန်လွှာ (တစ်မိသားစုကွန်ယက်ကိုပြင်ပမှာ Elisa
2013. 4. 11. ဒုက္ခသည်အကူအညီအဖွဲ့အစည်းများ NGO အဖွဲ့(အမိုးအကာ) စီးပွားရေးသဘောတူညီချက်
2013. 4. 19. ~ 7. 05. ပထမဦးဆုံးနာတာရှည်ဆေးရုံနှင့် Palliative အခြေခံပညာဆေးဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းများကျင်းပ
2013. 5. 30. ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုကုသမှုဖျော်ဖြေပွဲနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ကျန်းမာရေးကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေး (80လူပုဂ္ဂိုလ်များ)
2013. 7. 18. Medical Center မှပထမဦးဆုံးနှစ်ပြည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲထားမျှော်လင့်ပါတယ် (200လူပုဂ္ဂိုလ်များ)
2013. 8. ဆုံးဖြတ်ချက်ရေးသားခြင်းမျှော်လင့်ချက် Medical Center မှကော်မတီသည် (1စီးပွားရေးအုပ်စုရလဒ်များနှင့်
2013. 9. 4. ~ 2013. 12. 4. ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများ, ပညာရေးကောက်ယူ
2013. 10. 11. ကျောင်းကစီးပွားရေးသဘောတူညီချက်ထက်ပိုမို
2013. 11. 13. Jongno-Gu, လူငယ်အကြံပေးခြင်းအလယ်ဗဟိုစီးပွားရေးသဘောတူညီချက်
2013. 11. 26. ဆိုးလ်မြို့ cheongsonyeo စင်တာ (မဂ်ဂဒါလေးအသိုင်းအဝိုင်း) စီးပွားရေးသဘောတူညီချက်
2012. 6. 27. မျှော်လင့်ချက်စောင့်ရှောက်မှုစင်တာတည်နေရာ
2012. 7. 17. ကျင်းပမျှော်လင့်ချက်စောင့်ရှောက်မှုစင်တာစီးပွားရေးသတင်းအချက်အလက် session တစ်ခု
2012. 9. 21. ~ 2013. 2. 13. ကနျြးမာရေးသင်တန်းကျင်းပ (9အချိန်, သင်တန်းသားများကိုအရေအတွက် : 344လူပုဂ္ဂိုလ်များ)
2012. 12. 21. နာတာရှည်ဆေးရုံစေတနာ့ဝန်ထမ်း changdansik